Admin – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : नेपालमै ग्यास र पेट्रोल खानी रहेकाे चिनियाँ अध्ययनकाे निष्कर्ष, अब नेपाल मै उत्पादन हुने काठमाडौं/ दैलेख ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरिएको छ । नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गरिएको सेस्मिक सर्भेको प्रतिवेदनले दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको हो । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पठाएको प्रतिवेदनमा यहाँ ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको बताइएको छ । चिनियाँ टोलीले प्रतिवेदन पठाएपछि उत्खननका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका भूगर्भविद् डा. सुधीर रजौरेले बताउनुभयो । सर्भे गरिएको स्थानमा ग्यास र पेट्रोल छ भन्ने प्रमाणित भयो, उहाँले भन्नुभयो, अब कुन भू–भागमा कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास छ भनेर अन्तिम सर्भे हुनेछ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण देखाउँदै विज्ञ तथा प्राविधिकको टोलीलाई चीन सरका
Sapana Sanjal : ओखलढुंगा / ओखलढुंगा खिजिदेम्बा गाऊपालिका ५ ढाडखर्क का ६८ बर्षीय मित्र बहादुर तामाङको धा’रि’लो ह’रि’यार खुकुरी र दा’ऊ प्र’हा’र ग’रि ह’त्या भ’ए’को छ । ह’त्या’मा सं’ल’ग्न उनकै आफ्नै भाई ६७ बर्षीय शेर बहादुर तामाङ र शेर बहादुरका छोरा ३६ बर्षीय बिर बहादुर तामाङ रहेका छन् । आज दिउसो साढे १२ बजे हत्या भएको जानकारी प्राप्त हुन साथ ईलाका प्रहरी कार्यालय खिजिफलाटेबाट प्रहरी टोली खटि गई खु’कु’री सहित ह’त्यामा सम्लग्न दुवै जनालाई ह’त्यामा प्र’यो’ग भएको खुकुरी र दाऊ सहित पक्राउ गरेको छ । उनिहरुले अंशबण्डाको बिषयमा विवाद हुदाँ धा’रि’लो ह’ति’यार खु’कु’री र दा’उले टाउकोमा प्र’हार ग’र्दा मित्र बहादुर तामाङको घटनास्थलमानै मृत्यु भएको हो । थप अनुसन्धानको लागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाबाट समेत प्रहरी टोली घटनास्थल खटि गएको छ । उक्त स्थान जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाबाट अन्दाजी ६
Sapana Sanjal : पोखरा क्षेत्रमा हिजोआज (सापु) को संक्रमण देखा परेको छ । हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका नेत्र रोग बिषशेज्ञ डा. इन्द्र महर्जनका अनुसार विगत दुई साता देखि पोखरा क्षेत्रमा सेतो पुतलीको शंक्रमण देखा परेको बताए । आँखामा सेतो पुतलीको झुस बिजेर रातो र सुनिएका करिब २० जना बिरामीहरु हिमालय आखाँ अस्पतालमा उपचार गर्न आएको नेत्र विशेषज्ञ डा. महर्जनले जनाए । आखाँ रातो र सुनिएको अबस्थामा जति सक्दो छिटो आँखा अस्पतालमा गएर उपचार गर्दा निको हुने उनले जनाए । आखाँमा पिप परेको अबस्थामा आखाँमा सुई लगाउने र आखाँको अप्रेसन गर्ने दुई ढंगबाट उपचार गर्न सकिने भएको डा. महर्जनले जनाए । प्रायः गरी भदौं र असोज महिनामा देखापर्ने सेतो पुतलीको झुसका कर्णहरु आँखामा पर्न गएमा समयमै उपचार हुन नसके आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने डा.महर्जनले चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो दुई हप्तामा सेतो पुतलीको झुसका कर्णहरु ब
Sapana Sanjal : माधब पौडेल / कुरा यहि साउन २५ गतेको हो जिपि कोईराला स्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र , तनहूँ, दुलैगौडा कर्मचारी (मेरो भतिज बुहारी) अप्सरा भण्डारी पौडेल कार्यालयबाट घर फर्कनेक्रममा व्यास नगरपालिका वडा नं. ५ चापाघाटमा बस दुर्घटना पश्चात दमौलीका विभिन्न अस्पतालमा उपचार नहुने भएपछि पोखराको मेटोसिटी अस्पताल पुयाईन्छ , बिहान करिब १ देखि सवा ११ को बिचमा पुर्याएको घाईतेलाई हामी उपचार गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने जवाफ नदिईकन बेलुका करिब ७ बजेतिर उपचार हुन नसक्ने बताईन्छ । रातभरको माथापच्चीपछि भोलिपल्ट खराब मौषमका बाबजुद पत्रकार प्रदिप काफ्लेको सहयोग र सद्भावले बिहान करिब १०ः३० को समयमा ग्राण्डी अस्पतालको हेलिप्याडमा हेलीकप्टर ल्याण्ड गराईन्छ त्यसपछि चिकित्सकहरुको दौडादौड शुरु हुन्छ , पैसाको खोलो बगाईन्छ, अपरेशनहरु गरिन्छ , बिरामीको अवस्था अलिकति सुध्रिएको भान भयो र केहि मानिस अन्य तार
Sapana Sanjal : जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले १३ वर्षीया बालिकालाई भारतमा बे’चेको आरोपमा ५० वर्षीया एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ । भेरीगङ्गा नगरपालिका–६ सुर्खेतकी महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । विसं २०७१ जेठ १८ गते गुर्भाकोट नगरपालिका–९ सुर्खेतकी १३ वर्षीय बालिकालाई ती ५० वर्षीया महिलाको योजना र प्रपञ्चमा उनकै छोरीले भारतमा राम्रो नोकरी लगाइदिन्छु भनी ललाइफकाई गरी दिल्ली लगी बे’चबि’खन गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको जिप्रका सुर्खेतका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घर्तीले जानकारी दिनुभयो । “विसं २०७१ जेठ १८ गतेको घटनालाई उल्लेख गरेर आरोपित महिलाका वि’रुद्ध गु’र्भाकोट नगरपालिका–९ का ५८ वर्षीया महिलाले विसं २०७७ माघ २६ गते सुर्खेत जिप्रकामा बालिका बे’चबि’खनको जाहेरी निवेदन दिएकी थिइन्”, प्रहरी नायब उपरीक्षक घर्तीले भन्न
Sapana Sanjal : काठमाडौं । मानुषी लघुवित्तको आईपिओ बाँडफाँड आज हुने, कति जनाले पाउने भए त ? मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपिओ बाँडफाँड आज मिति २०७८।०५।६ गते आईतवार हुने भएको छ । धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्रि प्रबन्धक रहेको यस.बि.आई. मचेन्ट एण्ड बैंकिङ्गका अनुसार प्रि–अलोटमेन्ट भैसकेको र सम्भव भएसम्म आज आईतवार आईपिओको रिजल्ट निस्कने छ । सदा झै यस पटकको आईपिओको रिजल्ट यदि आज आईतवार निस्किएमा, निष्काशनको समयमै अनलाईनबाट हेर्न केही कठीनाई भएपनि बेलुका २ बजे पश्चात भने रिजल्ट हेर्न सहज हुनेछ । आईपिओको निष्काशन रिजल्ट www.iporesult.cdsc.com.np, यस.बि.आई. मचेन्ट एण्ड बैंकिङ्गको वेभसाईट तथा स्वयं मानषी लघुवित्तको अफिसियर वेभसाईट मार्फत हेर्न सकिने छ । लघुवित्तको जारी पुँजी रु. १०,९३,७५,०००।– को ३६ प्रतिशतले हुन आउने रु.३,९३,७५,०००।– रकम बरावरको प्रति शेयर रु.१००।– अंकितका दरका जम
Sapana Sanjal : भदौ ६ गते । साताकाे पहिलाे दिन आइतबार ह्वात्तै घट्यो सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ । आज आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य घटेको छ । आज छापावाला सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँ घटेर नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज छापावाला सुन ताेलामा ३ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुन पनि तोलामा ३ सय रुपैयाँ घटेर प्रतितोला ९० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यता चाँदीकाे मूल्य पनि तोलामा १५ रुपैयाँ घटेको छ । आज चाँदी ताेलामा १५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार १ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । **थप जानकारीका लागि तल क्लिक गर्नुहाेस्** काेराे-ना भा- ईरस (काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि
Sapana Sanjal : काठमाडौं । पूर्व युवराज पारस शाहले हार्ले डेभिसनको बाइक चलाउँदा हेलमेट लगाउनु नपर्ने दाबी गरेका छन्। शुक्रबार साँझ हेलमेट नलगाएको आरोपमा प्रहरीले समात्न खोजेपछि प्रहरीसँग पारसको झगडा भएको थियो। प्रहरी र पारस शाहबीच विवाद भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल छ। सो भिडियो बारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पारसले हार्ले डेभिसनको बाइस चलाउँदा अमेरिकामा पनि हेलमेट नलगाउने गरेको बताएका हुन। उनले फेसबुकको स्टोरीमा लेखेका छन्, ‘यो मेरो जिन्दगी हो। अमेरिकामा पनि हार्ली चलाउँदा कसैले पनि हेमलेट लगाउँदैनन्।’
Sapana Sanjal : काठमाडौं, साउन १६ । अनुदान खानकै लागि छिमेकीको भैँसी केही दिनलाई ल्याएर अनुदान खाएको खुलेको छ । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का किसान देबीप्रसाद पन्थले गाउँपालिकाको अनुदान खानका लागि छिमेकीको घरबाट भैसी ल्याइ गोठमा देखाएको र अनुदान पश्चात फिर्ता गरेको रहस्य खुलेको हो । दुईवटा लैनो भँैसी पालेवापत गाउँपालिकाले ७५ हजार अनुदान दिने भएपछि कृषकहरुले गाउँपालिका प्रति छारो हालेर अनुदान खाने गरेको खुलेको हो । यता कृषक देबीप्रसाद पन्थले छिमेकी हुमानाथ पन्थकोबाट ८२ हजार रुपैयाँमा भैँसी किनेर लगेको दाबी गर्नुभयो । भैँसी किनेर लगेपश्चात महिलाहरुलाई नजिक पर्न नदिने, हान्ने र ठूलो भएका कारण आफू बेच्न बाध्य भएको बताउनुभयो । आफूले भैँसी बेच्ने भनेपछि हुमानाथ आफैँले लान्छु भनेर उहाँलाई नै दिएको उहाँको जिकीर छ । देबीप्रसादसँग शनिबार बिहान फोन सम्पर्क गर्दा आफूले अहिले ७